သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အပ်ချုပ်ပညာ ခလုတ်များ လေး -> တိုက်တေနီယမ်အပ်ချုပ်အပ်နဖားကို
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan တိုက်တေနီယမ်အပ်ချုပ်အပ်နဖားကို ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
Point: R / Kn / BP ရေနံကုမ္ပဏီက / spî
size: 9/65 ~ 21/130
Equivalent Systems: 142X5, SY1413
machine: Eyelet Buttonhole စက်
ကိုတူးသည်, စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှု, Phoenix eying non-မျက်စိအပ်ချုပ်စ​​က်ချုပ်။ (အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်ထားသောပြောင်းပြန်စက်) buttonholing များအတွက်သင့်လျော်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 142X5, SY1413 ။
Equivalent Systems: 558
ဒါဟာ eyelet buttonhole စက်အဘို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာကို double groove ယ်နှင့်ဖြောင့်ပုံသဏ္ဍာန် eyelet ခလုတ်ကို Hole ကိုဆုံးဖြတ်ရန်။ ဂျင်းဘောင်းဘီ, ဝတ်စုံနှင့်အကျီပေါ် buttonholing များအတွက်သင့်လျော်, Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 558 ။